Wallapop inovandudzwa nekuwedzera chikamu chitsva: mota | IPhone nhau
Wallapop inovandudzwa nekuwedzera chikamu chitsva: mota
Kwemakore akati wandei, Wallapop yave imwe nzira yekutengesa kwechinyakare zvinhu zvechipiri-semaThousand Ads, eBay, Vivo ... Kutenda kunowanikwa nemidziyo yedu tinogona kukurumidza kuwana zvese izvo vavakidzani vedu vanoda kutengesa mukati kesi isu taifarira kuitenga. Kunyangwe kushambadza paTV kunowanzo kuve kwakanaka, mashandiro echishandiso, kazhinji kazhinji anosiya zvakawanda kudikanwa, kunyanya mune chimwe chinhu chakakosha semameseji. Kana isu tikataura nezve mukana wekusefa zvemukati zvinhu zvinoomarara, zvigadzirwa zvakasiyana zvisina chekuita nechikamu chimwe chete, chimwe chinotadzisa basa kana tichitsvaga chigadzirwa chatisina ruzivo rwakanyanya nezvacho kana kuti hatisi kunyatsojekesa zvatiri kutsvaga.
Zvakafanana zvinoitika nechikamu cheMotor neChishongedzo, patinowana midhudhudhu, mota nezvimwe zvinhu zvakasanganiswa munzvimbo dzakaenzana. Neraki kune vese avo vari kuronga kutenga yechipiri-ruoko mota, vakomana vekuWallapop vakagadzira chikamu chinonzi Mota, nacho seta mazwi ekutsvaga emota yatiri kutsvaga.
Mukati meichi chikamu chitsva, tinogona kusarudza mhando yemotokari yatinoda: Diki, Coupe, Sedan, Estate, Minivan, 4 × 4, Van nevamwe. Asi kana isu tisingazive chikamu icho mota iri kubvunzwa inoenderana, tinogona kushandisa yekutsvaga injini yemhando uye mamodheru. Ichi chikamu chitsva chinotibvumidzawo kumisikidza huwandu hwemitengo hwatinoda kushandisa, pamwe nezuva rekunyora mota uye huwandu hwemakiromita.
Kuti tiwedzere kusimbisa kutsvaga, tinogona zvakare kuona kana mota yatinoda iri Diesel, peturu kana magetsi, pamwe nerudzi rwechinoshanduka: manyore kana otomatiki. Isu tinokwanisa zvakare kumisikidza nzvimbo yatiri kuda kuita tsvagiridzo, kana kuchinjana kuchigamuchirwa pamwe nekumisikidza marongero atinoda kuti mota dziratidzwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Wallapop inovandudzwa nekuwedzera chikamu chitsva: mota
Foxconn Inozivisa Revenue Receleration Nekuda Kwe Yakaderera Kuburitsa Kwe iPhone 7